Mutevedzeri wemutungamiriri weApple anoda kutakura makiyi ake nechikwama chake paApple Watch | Ndinobva mac
Mutevedzeri wemutungamiri weApple anoda kuchengeta makiyi ake uye chikwama paApple Watch yake
Toni Cortes | 30/06/2021 14:00 | dzakawanda
Chinhu chega chakanaka kuti denda rinofara riri kutisiya nderekuti iwe unogona kutobhadhara neNFC kiredhiti kadhi kwese kwese. Mumabhawa, mabheka, ma greengrocers, gasi, kunyange mumamashini ekutengesa aunokwanisa Bhadhara neako Apple Watch, kunyangwe iwo ari ekuseka zviyero. Nenzira iyi tinodzivisa kubata mari nemari.
Kana ndikabuda kunze kweguta rangu ndichifamba, nekutakura yangu Apple Tarisa LTE Ndine zvakakwana kubhadhara mune chero chitoro kana kana ndichidya kudya kwemangwanani mubhawa. Uye kana ndikatora mota, nekutora yangu iPhone kwandinenge ndaisa app DGT Ine rezinesi rangu rekutyaira, zvakandikwanira. Chikwama changu hachina kusiya dhirowa repatafura yemubhedha kwenguva yakareba ... Hungu, ndiri kunyepa: ndakaitora kuti nditore miviri yekudzivirira.
Kumusangano weVagadziri Vepasi Pose wegore rino, Apple yakaratidza chimwe chezvinhu zvakakumbirwa zvakanyanya paWallet app: tsigiro ye malayisensi ekufambisa. Ne iOS 15 uye watchOS 8, zvichave zvatove kugona. Izvo zvinongoda chete hutongi hwehurumende yenyika yega yega kuibvumidza.
Kevin lynch, Mutevedzeri weMutungamiriri weApple weTekinoroji, anotarisira kuzhinji kwekuvandudza kweApple Watch, uye achangobva kupa bvunzurudzo kuna Yahoo Finance. Mariri akataura nezve smartwatch yaApple uye rutsigiro rwayo ramangwana rezinesi zvekutyaira nekiyi dzemusuwo. Lynch anoti munguva pfupi inotevera tichaenda tisina chikwama uye tisina makiyi, chete neApple Watch.
Uye haina kure kutorwa. Kuti rezinesi rekutyaira rinogona kuverengerwa muWallet application senge chero inoenderana Visa, inongova nyaya yenguva. Kuti iwe unogona kuvhura mota inoenderana ne Kiyi yemota, yatove chokwadi.
Uye smart smart masuo edzimba anoenderana ne HomeKit Apple's kana Amazon's Alexa, ivo vatoripo pamusika. Saka Apple yakatove nekuisa hwaro hwekuti zvese izvi zviitike. Izvo zvinongosara kumakambani echitatu (veruzhinji manejimendi uye vagadziri vemotokari) kuti vapinde mune izvi kufambira mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mutevedzeri wemutungamiri weApple anoda kuchengeta makiyi ake uye chikwama paApple Watch yake
Apple ndiyo mutengi mukuru pane yeGoogle gore rekuchengetedza chikuva